Mialà Amin’ny Fivavahan-diso!
Tsy tian’i Satana sy ny demoniany hanompo an’Andriamanitra ianao. Mampiasa tetika maro izy ireo mba hampialana ny olona amin’Andriamanitra. Iray amin’izany ny fivavahan-diso. (2 Korintianina 11:13-15) Diso ny fivavahana iray raha tsy mampianatra ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly. Ny fivavahan-diso dia toy ny vola sandoka izay hoatran’ny tena izy, nefa tsy misy dikany akory sady mety hahitanao loza.
Andriamanitry ny fahamarinana i Jehovah, ka tsy tiany mihitsy ny fampianaran-diso. Nisy mpivavaka nitady hamono an’i Jesosy, tamin’izy teto an-tany. Nihevitra anefa izy ireo fa ny fivavahany no marina. Hoy izy ireo: “Iray ihany ny rainay, dia Andriamanitra.” Neken’i Jesosy ve izany? Tsia! Hoy izy: “Ianareo avy amin’ny Devoly rainareo.” (Jaona 8:41, 44) Olona maro koa ankehitriny no mihevitra fa manompo an’Andriamanitra. Manompo an’i Satana sy ny demoniany anefa izy ireo, raha ny marina!—1 Korintianina 10:20.
Manome voankazo ratsy ny hazo ratsy. Manao ratsy koa ny olona ao amin’ny fivavahan-diso. Feno zava-manahirana ny tany, satria manao ratsy ny olona. Ao ny maloto fitondran-tena, miady, mangalatra, mampahory, mamono olona, ary mametaveta. Mivavaka ihany ny ankamaroan’ny olona manao an’ireo, nefa satria diso ny fivavahany, dia tsy manao ny tsara izy ireo. Tsy ho naman’Andriamanitra izy ireo, raha tsy miala amin’ny ratsy.—Matio 7:17, 18.
Mampianatra ny olona hivavaka amin’ny sampy ny fivavahan-diso. Mandidy antsika anefa Andriamanitra mba tsy hivavaka amin’ny sampy, ary marina ny azy. Ho tianao ve raha tsy miresaka aminao mihitsy ny olona iray fa miresaka amin’ny sarinao? Azo lazaina hoe tena namanao ve izany olona izany? Tsia. Tian’i Jehovah hivavaka aminy ny olona, fa tsy amin’ny sarivongana na sary tsy mananaina.—Eksodosy 20:4, 5.
Milaza ny fivavahan-diso fa azo atao ny mamono olona rehefa misy ady. Nilaza anefa i Jesosy fa tokony hifankatia ny naman’Andriamanitra. Midika izany fa tsy mamono olona isika, raha tiantsika ilay olona. (Jaona 13:35) Ary na ireo ratsy fanahy aza dia tsy tokony hovonointsika koa. Tsy navelan’i Jesosy niady ny mpianany, na dia te hiaro azy aza, rehefa tonga hisambotra azy ny fahavalony.—Matio 26:51, 52.
Milaza ny fivavahan-diso fa hijaly ao amin’ny afobe ny ratsy fanahy. Ampianarin’ny Baiboly anefa hoe ho faty ny mpanota, fa tsy hankany amin’ny afobe. (Romanina 6:23) Andriamanitra fitiavana i Jehovah. Dia hampijaly olona mandrakizay ve izy? Mazava ho azy fa tsia! Iray ihany ny fivavahana tian’i Jehovah, ary izy io ihany no hisy ao amin’ny Paradisa. (Apokalypsy 15:4) Tsy hisy intsony ireo fivavahana mampianatra ny laingan’i Satana.
Mety foana ve izay fivavahana tianao?